Raisulwasaare Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo u dhoofay dalka Turkiya
May 29, 2012 - Written by Nairobi:-Wafdi uu hoggaaminayo Raisulwasaaraha DFKM Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xalay ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta airport ee magaalada Nairobi, isagoo ku sii jeeda magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga halkaas oo uu ka furmayo shir looga hadlayo arimaha Soomaaliya.
Raisulwasaaraha DFKM Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa socdaalkiisa waxaa ku weheliya qaar ka mid ah golihiisa wasiirada waxaana la filayaa in saaka ay gaaraan madasha shirka ka socda magaalada Istanbul ee xarunta dalka Turkiya.
Raisulwasaaraha DFKM Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kulan la qaatay intii uu ku sugnaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya Raisulwasaaraha dalka Kenya Raila Odinga iyaga oo ka wada hadlay xaalada dalka Soomaaliya
Shirka Istanbul waxa oo si rasmi u furmay 27-ka bishan kaas oo ay ka biyo diideen Maamulada Galmudug ,Puntland iyo Ahlu Suna iyaga oo sheegay in shirka ka dhacaya Istanbul uu ka horimaanayo dhamaan heshiisyadii ay gaareen saxiixayaasha Road Mabka kuwaas oo ka dhacay Muqdisho ,Garoowe ,Gaalkacyo iyo Adisababa.
Dhinaca kale Warsaxaafadeed ka soo baxay xalay Xafiiska Wasiirka Dastuurka, Fedraalka iyo Dib u Heshiisiinta C/raxman Xoosh Jibriil ayaa waxaa uu wasiirku sheegay in DFKM ay ka walaacsan tahay sida ay dowlada Turkiga u agaasimtay Shirka Istanbul 2 .
Wasiirka Dastuurka, Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta C/raxman Xoosh Jibriil ayaa ku eedeeyey dowllada Turkiya in ay shirka u qaaday kooxo si gaar ah isku abaabushay wuxuuna sheegay in shirka uu ula muuqdo mid wax loogu dhimayo geedi socodka nabada ee Soomaaliya iyo hirgelinta Roadmabka.
Ilaa haatan ma jiraan war rasmi ah oo ka soo baxay Madaxtooyada DFKM oo ku aadan shirka ka socda Istanbul iyo mowqifka rasmiga ah ee Madaxweynaha DFKM Shariif Sheekh Ahmed.